06/30/13 ~ MOBILE IT NEW
Smart Pro Journal issue 22 ကိုဒေါင်းနိုင်ပါပြီ..
9:26 PM Mobile သတင်းများ No comments
Smart Pro Journal ကို အပတ်စဉ် ၀ယ်ယူအားပေး ဖတ်ရှုကြသော
စာဖတ်ပရိတ်သတ်များနှင့် အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းယူကာ ဖတ်ရှုကြသော
စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်စဉ်ကထက်
ပိုမိုထူးခြားကောင်းမွန်ပြီး ၊အနှစ်သာရ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသည့် issue 22 ကို
စနေ နေ့တွင် ထုတ်ဝေ ဖြန်ချိလိုက်ပါပြီ။
ထူးထူးခြားခြား အနေဖြင့် ဘယ်အိုင်တီ ၊ မိုဘိုင်းလ် ဂျာနယ်ကမှ
မလုပ်ဘူးသေးသည့် Mobile SMS စနစ်ကို စတင်လိုက်ပါပြီ။ မိုဘိုင်းဖုန်းမှ တစ်ဆင့်
Mobile Knowledge Quiz အဖြေများကို ပေးပို့ရုံဖြင့် ငွေကျပ် ၅၀၀၀ ကျပ်တန်
ငွေဖြည့်ကဒ်များကို ကံစမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအပြင် အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်သော အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် ၂ စောင်နှုန်းဖြင့်
တစ်ပတ်အတွက် တစ်ပတ် ၂ စောင်နှုန်း သွားရောက်ကာ အခမဲ့ ထုတ်ယူနိုင်မှာ
အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလိုသူများအတွက် အောက်ပါ လင့်များတွင်
တင်ပေးထားပါတယ်။ စာဖတ်သူများအတွက် အရည်အသွေးကောင်း ကောင်းနှင့်
ဖတ်ချင်သူများအတွက် Quality ကောင်းကောင်း နှင့် PDF Files နှင့်
ဒေါင်းရာတွင် ဖိုင်ဆိုက်ကြီးလို့ ဒေါင်းမရသူများအတွက် အလွယ်တကူဒေါင်းနိုင်ရန်
အတွက် Normal Quality ဆိုပြီး ၂ မျိုးတင်ပေးထားပါတယ်။
9:14 PM ဗဟုသုတများ No comments
Internet Cafe ဆိုင်များအတွက် NetCafe 5.5 Full
9:06 PM internet No comments
Internet Cafe ဆိုင်များအတွက် NetCafe 5.5 Full Version ရလာလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အင်တာနက်ဆိုင်များအတွက် အသုံးအတည့်ဆုံးနဲ့ အသုံးအပြုဆုံး Software ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ Software မှာ ထိန်းချုပ်ရမယ့် ကွန်ပျူတာ အလုံးအရေကို အကန့်အသတ်မထားပါဘူး.. User တွေရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကိုလည်း Admin ကနေလှမ်းပြီး Shutdown လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် User တွေအသုံးပြုတဲ့ Computer ဆီကို တကူးတကသွားပြီး Shutdown လုပ်ပေးနေစရာမလိုတဲ့အတွက် Power Saver နောက်ပြီး ကျသင့်ငွေ တွက်ချက်ရာမှာနဲ့ အသုံးပြုသူရဲ့ Used Time ကိုတွက်ချက်ရာမှာ တိကျသေချာတဲ့အတွက် Customer တွေကို စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုလည်း တိကျသေချာစေမှာဖြစ်ပါတယ်..
Android Version အသစ် Jelly Bean 4.3 တွင်ပါဝင်လာသော features အသစ်များ
8:45 PM ဗဟုသုတများ No comments
Android Version အသစ် Jelly Bean 4.3 က Google က တရားဝင် မထုတ်သေ:ခင်မှာပဲ အရင်တစ်ပါတ်က အပြင်ကို ပေါက်ကြားခဲ့ပါတယ်..
Jelly Bean 4.3 firmware ကို Google Edition Phone အဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့ Galaxy S4 မှာတွေ့ရှိရာက ပေါက်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်...
အဲ့ဒီ့ တရားမဝင် ထွက်ရှိလာတဲ့ firmware ကနေတွေ့ရှိချက်အရ Google က Jelly Bean 4.3 မှာ features အသစ်အနဲငယ်သာ ထပ်ထည့်ထားတာ တွေ့ရတယ်ဗျ...
ကြားရတဲ့ သတင်းတွေအရ Google က Android firmware ရဲ့ next step အဖြစ် Key Lime Pie version ကို October လောက်မှာပဲ ထွက်ရှိဖို့ ကြိုးစားနေတာဆိုတော့.. ဒီ Jelly Bean 4.3 မှာ minor update တွေလောက်ပဲ ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်...
ဒါပေမဲ့ Google ရဲ့ minor update တွေဆိုတာ smart phone လောကကြီးအတွက် တော်တော်လေးကို လှုပ်ခက်သွားစေ တဲ့ features တွေပဲဗျ..
ကဲ ဒါဆိုရင် Jelly Bean 4.3 မှာဘာ features တွေ ပါလဲကြည့်ရအောင် ဗျာ...
7:10 AM internet 1 comment
ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီး နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းများစွာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဆော့ဝဲလေးပါ။ Internet တော့ရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်။ Windows XP/7/8 အားလုံးမှာအသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ မရဘူးလို့ပြောမှာစိုးလို့ ကိုယ်တုိုင်ကြည့်ထားတဲ့ပုံလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
7:08 AM ဗဟုသုတများ No comments
4:51 AM internet No comments
ဖုန်းပြော လွန်းသောကြောင့် ကင်ဆာ တစ်မျိုး တွေ့ရှိ
1:17 AM ဗဟုသုတများ No comments
အမေရိကန် နိုင်ငံမှ Dr. Brian Berry ဟာ Silver Nitro Oxide ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါ တစ်မျိုးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်...
သင်ဟာ ဖုန်းငွေဖြည့် ကဒ်ကို ဘယ်တော့မှ လက်သည်းနဲ့ မခြစ်မိပါစေနဲ့..
အဲ့ဒီမှာ အရေပြား ကင်ဆာ ဖြစ်စေတဲ့ Silver Nitro Oxide တွေ ပါပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်... ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး အတွက်
၁. ဖုန်းပြောတဲ့ အခါ ဘယ်ဘက်နားနဲ့ ပြောပါ
၂. ဆေးတွေကို ရေခဲရေနဲ့ တွဲမသောက်ပါနဲ့
၃. ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း အစာများများ မစားပါနဲ့
၄. မနက်ပိုင်းမှာ ရေများများ သောက်ပြီး ညဘက်မှာ လျော့သောက်ပါ
၅. ည၁၀ နာရီမှ မနက် ၄ နာရီ အတွင်းဟာ အိပ်စက်ဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါ
၆. ဆေးသောက်ပီး သို့မဟုတ် အစာစား ပီးပီးချင်း ရုတ်တရက် လှဲချခြင်းမျိုး ရှောင်ပါ
၇. ဖုန်းရဲ့ ဘက်ထရီ နောက်ဆုံး ကုန်ခါနီး ကျသွားခဲ့ရင် ဖုန်းမဆက် ပါတော့နှင့်
(( radiation အဆ ၁၀၀၀ လောက် ပိုပြင်းထန် ပါတယ်))
Myanmar Unicode - Myanmar3လက်ကွက် ကျင့်လိုသူများအတွက် Whizzo Typing Tutor
12:56 AM computer Software 1 comment
12:54 AM ဗဟုသုတများ No comments
- အပူချိန်မြင့်မားလာလျှင် ဘယ် electronic device တွေမှ ခံနိုင်မှု
တချို့  သော Laptop တွေဟာ အထူနဲ့ ထုပ်လုပ်ပြီး တချို့  Laptop တွေကို ပါးလွှာအောင်
အပူပိုင်းနိုင်ငံ အသုံးပြုမှုနဲ့ အအေးပိုင်းနိုင်ငံတွေ အသုံးပြုမှုဆိုပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ
ရှိပါတယ်။ အထူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပါးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အပူချိန်ညှိမှုကိုတော့ အားလုံး
Android Version အသစ် Jelly Bean 4.3 တွင်ပါဝင်လာသော...